I-Adobe XD ihlaziywa ngendlela enkulu nge 'Stacks' kunye nezinye iindaba | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Adobe XD ihlaziywa 'ngeZitaki', iiTokheni zoyilo, amaQela okuskrola nangaphezulu
UManuel Ramirez | | CSS, Izixhobo zoYilo, HTML, Ezahlukeneyo
I-Adobe XD ihlaziyiwe ngenani leempawu ezigxininisa iindlela ezintsha zokuyila, ukubonisa kunye nokusebenzisana. Uthotho lweempawu ezintsha ezinokufakwa 'kwiZitaki', iithokheni zoyilo kunye namaqela okuskrola.
Kodwa kuninzi okungakumbi thatha uyilo lwewebhu kwelinye inqanaba Ukusuka kwesi sicelo sikhulu sibizwa ngokuba yiAdobe XD. Ngoku siyakukhuthaza ukuba wazi ezinye zeenkcukacha zale nguqulelo intsha.
Siqala ngokuqokelela ezi ndaba kolunye uhlaziyo kwi Photoshop, Umzekeliso okanye efanayo Igumbi lokukhanya. Ukugcinwa yindlela entsha yokusebenza namaqela kunye nezinto. Singa Yenza isifaniso ngeFlexbox kwiCSS, besithi Ukugcinwa kweekholamu okanye imiqolo yezinto ezinendawo ebekwe phakathi kwazo. Njengokuba izinto ezikwiStack zongezwa, zisuswa, zahlelwa ngokutsha okanye zahlelwa kwakhona, ezinye izinto zilungelelanisa ngokuzenzekelayo, zigcina eso "sithuba".
Xa loo "mfumba" yenziwe, i-XD ibhaqa umkhombandlela wayo, nokuba umi nkqo okanye uthe nkqo. Injongo yezitokhwe kukuba zinokwenziwa uhlengahlengiso olulula kakhulu kwizinto ezikwi-UI Njengamakhadi, okwehliswayo, izikhangeli kunye neemowudi. Ngamanye amagama, yonke into ngoku "iguquguqukayo" kwi-XD xa siyila.
Amaqela "Skrolela" ayifumana Iiprototypes zethu zisebenza njengewebhusayithi kunye neeapps kwimveliso. Intsha entsha ecelwe luluntu lwe-XD yokutya, uluhlu, ii-carousels, iigalari kunye nokunye. Jonga ividiyo ukuze uyibone bukhoma:
Sikwanayo Uyilo lweempawu eziyindlela entsha yokusebenza kunye kubaqulunqi kunye nabaphuhlisi. Amagama aqhelekileyo ngoku angongezwa kumlinganiswa kunye nakwimbala yendlela kwiphaneli yeasethi kwaye ipapashwe kwi-CSS ekulungele ukukhuphela. Masithi uyilo lwethokheni yindlela elula yesalathiso yokwenza izigqibo zoyilo ezibonakalayo. Enye ividiyo ukuze ubone ukuba isebenza njani:
Kolu hlaziyo lutsha luncedo ku I-Adobe XD iphucule ukudityaniswa kweSlack, amakhonkco okwabelana ngokwezifiso kunye nokuboniswa kwedatha ngeTshathi yeXD,
Zonke zinye Uhlaziyo olukhulu lweAdobe XD kunye nokuba unokukhuphela ngoku ukuyivavanya kwaye uphucule ukuhamba kwakho xa uyila iwebhusayithi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Bugcisa » HTML » I-Adobe XD ihlaziywa 'ngeZitaki', iiTokheni zoyilo, amaQela okuskrola nangaphezulu
Izindlu ze-eclectic zigcwele ubuchule obunokuthi wonke umculi angathanda ukuba nazo
Igumbi lokukhanyisa le-Adobe lihlaziywa ngokwabelana ngokwabelana, ulawulo olukhulu kuhlelo, nokunye okuninzi